उत्तेजक कपडा लगाएर फेसबुकमा लाइभ गर्न नपाइने ! | Pennepal
Home विज्ञान प्रविधि उत्तेजक कपडा लगाएर फेसबुकमा लाइभ गर्न नपाइने !
उत्तेजक कपडा लगाएर फेसबुकमा लाइभ गर्न नपाइने !
एजेन्सी । उत्तेजक पहिरनमा फेसबुक लाइभ गसरसामानहरूको विज्ञापन तथा बिक्री गर्ने कार्य कम्बोडिया सरकारले रोक लगाएको छ । तर सरकारको यस्तो कदमलाई महिला अधिकारवादीहरूले खरतनाक र आधारहीन भएको आरोप लगाएका छन् ।
कम्बोडियाली महिला अधिकारवादी संगठनहरूले पनि सरकारको यस्तो कदमको विरोध गरेका छन् ।
स्मरण रहोस् कम्बोडियामा महिलामाथि बलात्कारको तथ्यांक निकै डरलाग्दो छ । सन् २०१३ मा राष्ट्रसंघले गरेको एक अध्ययन अनुसार २० प्रतिशत कम्बोडियाली पुरुषहरूले आफूले महिलामाथि बलात्कार गरेको बताएका छन् ।
टोटनहममाथि चेल्सीको जित
आयो ‘धुलो’को आइटम गीत (भिडियो हेर्नुहोस्)
कोरोना भाइरसको नयाँ लक्षण, वैज्ञानिक नै चिन्तित
पृथ्वी गोलो छैन भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्दा मृत्यु
‘कट’, ‘कपी’, ‘पेस्ट’ का आविष्कारक अस्ताए